About / Contact - DinDeng - ดินแดง
[TH] ดินแดงเป็นการรวมตัวกันของนักคิด นักเขียน นักแปลไร้สังกัดหรือองค์กรใดๆ เราสนใจประเด็นปัญหาในประเทศไทยและภูมิภาครอบๆ
เป้าหมายของเราคือการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านระบบทุนนิยม ต่อต้านจักรวรรดินิยม การปฏิเสธอำนาจเหนือตัวมนุษย์ และนิเวศวิทยาแบบก้าวหน้า เพื่อทำความเข้าใจการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหล่ากรรมาชีพ และเหล่าผู้ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในสังคม
ชื่อ ดินแดง สื่อถึงดินสีแดงที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย ดินแดนแห่งความยากจน และการกดขี่ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและที่มาของเว็บไซต์นี้
[EN] Din Deng isacollective of non-aligned like minded thinkers, writers and translators focused on issues in Thailand and the surrounding region. We aim to explore post-capitalism, post-imperialism, self-determination and progressive ecology, reshaping our understanding of proletarian and subaltern struggles in the fight for dignity. Din Deng (ดินแดง) (red soil) refers to the red coloured dirt, the soil of North Eastern Thailand,aland of poverty and exploitation. This is the well from which we draw our inspiration and meaning.
[MY] Din Deng (ဒင်းဒန်) ကတော့ ထိုင်းနိုင့်ငံနှင့်အနီးတဝိုက်ဒေသတွင်းက ဘာသာပြန်ဆိုသူများ၊ စာရေးသူများနှင့် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ နှင့် အတူဖွဲ့စည်းထားသော ဘက်မလိုက်သည့် စုပေါင်းရပ်ဝန်းတခုဖြစ်သည်။ အရင်းရှင်စနစ်အလွန်၊ နယ်ချဲ့ဝါဒအလွန်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ခေတ်မီသည့် ဂေဟဗေဒအမြင်တို့နှင့်အတူ အရင်းမဲ့အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ခံဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် တော်လှန်တိုက်ပွဲများကို ပြန်လည်နားလည်စေဖို့ရာရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယိုးဒယားဘာသာစကားဖြင့် မြေနီဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော din deng သည် မြေအနီရောင်များလွှမ်းခြုံထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသ၊ တနည်းအားဖြင့် ဆင်းရဲမှုနှင့်အတူ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသည့်ဒေသကိုကိုယ်စားပြုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ทีมของเรา – Our Team
โปรดิวเซอร์ – Producers
บรรณาธิการ – Editors
ดีไซเนอร์ – Designers